WAFTIGII XISBIGA KULMIYE EE KU SUGNAA GALBEEDKA SOMALILAND OO MUDAHARAAD KALA KULMAY DADWEYNAHA DEEGAANKA QOL-UJEED |
WAFTIGII XISBIGA KULMIYE EE KU SUGNAA GALBEEDKA SOMALILAND OO MUDAHARAAD KALA KULMAY DADWEYNAHA DEEGAANKA QOL-UJEED
Qolujeed(GNN) gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Bixii Cabdi oo saaka socdaal ku tagay deegaanka qolujeed oo hoos yimaada gobolka awdal ay shacabka ku dhaqan deegaankaaasi markii ay gadheen ay kala kulmeen waji gabax iyo mudaharaad ay kaga soo horjeedaan xisbiga kulmiye.
Waxaana dadawaynaha ku dhaqan deegaankasi ay ka dhawaajiyeen inaanu xisbiga kulmiye waxba u qaban deegaankan tan iyo intuu uu ku guulaystay madaxtinimada dalka, sidoo kalena waxay dadwaynahani ka cabanayeen sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo ka agdhaw dhawi madaxwayne ku xigeenka Somaliland cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo ay sheegeen inaanu deegaanka iyo kuwo kaleba aanu waxba u qaban isagoona hore balan qaadyo ugu sameeyey degaankan balse aanu oofin.
Waftidan oo socdaalkoodu daaranaa sidii ay usoo indho indhayn lahaayen xalada dad iyo duunyo ee ay ku sugan yihiin dadwaynaha ku dhaqan deegaanadaasi iyo waliba inay soo eegaan qaabka ay uga socoto diiwaangalinta codbixiyaayaasha ayaa waxa markii waftidani gaadheen Deegaanka qol-ujeed ay shacabkaasi kala horyimaadeen foori iyo qaylo iyo ereyo ay kaga dhawaajinayeen inaanu xisbiga kulmiye waxba u qaban deegaanka isla markaana ay u baahan yihiin isbadal .
markii dhawaaqaasi iyo mudaharaadkani dhacayay waxaa meesha ka ag dhawaa laba suxufi oo kala ah Maxamed Yusuuf Bakayle oo ka hawl gala tvga STAR Iyo Waliba Khadar Cabdi Xasan (Gurayte) oo isna ka hawl gala tvga SBC waxaanay isku dayeen inay gutaan waajibaadkooda shaqo ee la xidhiidha mujinta dareenka dadweynuhu muujiyeen. Waxaana markiiba amar bixiyay wasiirka xidhidhka golayaasha Somaliland cali xaamud jibril oo qeyb ka ahaa waftiga madaxweyne kuxigeenka iyo gudomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi waxaanu ciidankii ilaalada ku amray in qalabka laga qaado iyagana ladhigo xabsiga ma ay suuro galin taasi waxaanay ciidanku gaadhsiiyeen labadan suxufi dhawacyo kala duwan, sidoo kalena waxay ciidanku ka qaadeen qalabkoodii ay wateen ee ay ku shaqaynayeen.